Abaqhagamshelwa eCofttek -Ukutya ukutya okungezelelweyo
UGqr. Zeng Zhaosen
Bhalisa ukuze ufumane ulwazi malunga nenkampani yethu.
Uya kufumana iindaba zakutsha kunye neebhonasi.
I-Cofttek yafunyanwa ngo-2008, lishishini lokuXhasa ukutya okuphezulu kwezobuchwephesha lokudibanisa imveliso, iR & D kunye nentengiso.
Eyona Nyango yokuLuphala nokuGuga yeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Isongezelelo seMagnesium L-Threonate: Izibonelelo, iDosage, kunye neziphumo zeSide
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA): Izibonelelo, uMthamo, Ukusetyenziswa, isongezelelo
Esona Sibonelelo seNootropic seAlfa GPC ngo-2021
Ikhaya Ngathi Blog Abezonxibelelwano iimveliso
isikhanyeliAsenzi naliphi na ibango malunga neemveliso ezithengiswe kule webhusayithi. Akukho lwazi lubonelelweyo kule webhusayithi luye lwavavanywa yi-FDA okanye yi-MHRA. Naluphi na ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lubonelelwa ngokolwazi lwethu kwaye akujoliswanga ukubuyisela ingcebiso ngugqirha oqeqeshiweyo. Nawuphi na ubungqina okanye uphononongo lwemveliso olunikezwe ngabathengi bethu ayizizo izimvo ze-cofttek.com kwaye akufuneki zithathwe njengezindululo okanye inyani. Copyright © COFTTEK Inc.